Zimbabwe: EU Remains Sceptical of Mugabe, Official - allAfrica.com
Zimbabwe: EU Remains Sceptical of Mugabe, Official
External RelationsMorocco: U.S. First Lady Arrives in MarrakechSomalia: Al-Shabaab Down but Far From OutAfrica: Amisom Troops Miss Monthly Stipends in Wake of EU Funding CutTanzania: State Won't Reverse Stand Against Gay Marriage
A SENIOR Germany official has said that the European Union (EU) remains sceptical of President Robert Mugabe's government despite the easing of sanctions and moves to re-engage Harare.
Tsvangirai claims Mugabe stole his way to victory in last year's elections but his challenge against the outcome was dismissed by the country's top court.
Speaking to journalists who were on a week-long tour of Germany, the federal government official said the West remains sceptical of the 90-year-old Zimbabwean leader's plans.
"Our assistance to Zimbabwe will remain indirect, that is through the private partnership investments, not government-to-government because President Robert Mugabe is not a favourite of Western governments," he said.
"Zimbabwe has educated people and infrastructure whose attributes any serious investor would need to do business and this makes the country unique from other African nations," he said.
BusinessExternal RelationsGovernanceInternational OrganisationsSouthern AfricaZimbabwe InFocus: Zimbabwe